ပါးစပ်သရမ်းတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ? - For Her Myanmar
Tips, Women News
April 12, 2018 by Sugar Cane
တစ်ခါတလေ စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ ပါးပါရိုက်ချင်မိ.. သို့သော်…..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာရင် မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေထဲမှာ လမ်းသွားတဲ့အခါ နှုတ်နဲ့ အစခံရခြင်း၊ သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ခံရခြင်းဆိုတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးဟာ တောမှာပဲမွေးမွေး၊ မြို့မှာပဲမွေးမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာပဲနေနေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပဲနေနေ အမျိုးသမီးမှန်ရင် ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာပါ။
ဒီလိုအစခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ် အနှောင့်အယှက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင် မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာ နှုတ်နဲ့ပြန်လည် ခွန်းတုံ့ပြန်ခြင်းကိုပဲ ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အမူအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးအကြည့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်လို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယောင်းတို့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါ နှုတ်နဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတားမျိုးကြုံလာရရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်လဲဆိုတာကို ယောင်းတို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Related Article >>> အလုပ်ခွင်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှု
၁။ လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ပုံစံက ကျားတွေကြားထဲ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ သမင်မလေးပုံစံမပေါက်ပါစေနဲ့
နှုတ်သရမ်းတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေက သူ့တို့ရဲ့သားကောင်ကို ကောင်းကောင်းရှာတတ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်လျှောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာ ကြောက်တတ်ပုံရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကိုပဲ ရွေးချယ် လှောင်ပြောင်အနှောက်အယှက်ပေးလေ့ရှိပါတယယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ကလမ်းပေါ်ထွက်တဲ့အခါ အရာရာကိုကြောက်လှန့်အရှုံးပေးပြီး ခေါင်းငုံ့လျှောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ့်ပုံစံက သတ္တိရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါစေ။ ဒါဆိုရင်တော်ရုံတန်ရုံလူက မနှောက်ယှက်ရဲပါဘူး။
၂။ ကိုယ့်ကို နှောင့်ယှက်တာလား၊ စချင်ရုံ သက်သက်လားဆိုတာခွဲခြားတတ်ပါစေ
လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါ နှုတ်နဲ့အနှောင့်အယှက်ပေးတာမျိုးမှာလည်း ကွဲပြားတာတွေရှိပါသေးတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်စကောင်လေးတွေ မကြားတကြားစတာမျိုးက စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုထူးပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါဘူး။
ဥပမာ “ချစ်စရာလေးနော်” လို့မကြားတကြားပြောတာမျိုး “ ဟိတ်၊ ဘယ်သွားမလို့လဲ” လို့ မထိတထိလှမ်းပြောတာမျိုးက သိပ်ပြဿနာမရှိလှပါဘူး။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြုံလာခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တာက မကြားချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တာပါပဲ။ ကိုယ်ကစိတ်မဝင်စားတာသိရင် နှောင့်ယှက်တဲ့သူလဲ လက်လျှော့သွားပါလိမ့်မယ်။ (အမှန်တော့ ဒါဟာလည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာပါပဲ။ ဒီအတွက်တော့ သူတို့ကို ကောင်းကောင်းပညာပေးမှရပါမယ်။ ဥပမာ မိဘကဖြစ်စေ၊ ဆရာ၊ဆရာမတွေကဖြစ်စေ၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက သူများအတွက်လည်း မကောင်းသလို ကိုယ့်အတွက်လည်း သိက္ခာကျစေကြောင်း ဘာညာပေါ့ အဲ့လို ဆုံးမရမယ့် အမျိုးမို့ ကိုယ်က ခဏ ပလစ်ထားလိုက်လည်း ရပါတယ်)
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ အုပ်စုလိုက် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လှောင်ပြောင်တာ၊ ကိုယ့်ကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်အထိ မကြားတကြားလိုက်ပြောနေတာ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ပြီး မဖွယ်မရာစကားတွေပြောတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုခုတုံ့ပြန်ဖို့လိုနေပါပြီ။
၃။ ခွန်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာလည်း မှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကို နှောင့်ယှက်မှုတိုင်းကို ခွန်းတုံ့ပြန်ရန်စကားဆိုတာကလည်း မှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ကသူတို့ကိုပြန်ရန်စကားဆိုလေလေ၊ သူတို့ကကိုယ့်ကိုရယ်မောလှောင်ပြောင်လေလေလုပ်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ဆတ်တဲ့၊ သွေးဆူလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှု(Emotion) အပေါ်မူတည်ပြီး မတုံ့ပြန်သင့်ပါဘူး။ ဥပမာ ဒေါသတကြီးပြန်အော်တာမျိုးပေါ့။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်က သူတို့ကို ကြမ်းတမ်းစွာတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ သူတို့ကပြန်ပြီးအန္တရာယ်ပေးတာမျိုးတောင်ရှိတတ်ပါတယ်။
၄။ ဒါဆိုရင် ဘာမှ ခွန်းတုံ့မပြန်ပဲငုံ့ခံနေလိုက်တာကရော မှန်ကန်ပါရဲ့လား
ဒါကတော့ အဆိုးဝါးဆုံးတုံ့ပြန်မှုပါပဲ။ ကိုယ့်ကငုံ့ခံနေသမျှ သူတို့က မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့နှောင့်ယှက်ချင်တိုင်းနှောင့်ယှက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့သူတွေလို့ ပိုပြီးအထင်ရောက်စေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုတွေ့တိုင်း ထပ်မံနှောင့်ယှက်ဖို့ဝန်မလေးသလို တခြားမိန်းကလေးတွေကိုလည်း ဒီလိုနှောင့်ယှက်ဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Related Article >>> လတ်တလော မြန်မာမိန်းကလေးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပါးစပ်မုဒိမ်းကောင်များ
၅။ တည်ငြိမ်စွာတုံ့ပြန်ပါ၊ မကြောက်ပါနဲ့
ကိုယ့်ကို နှုတ်နဲ့နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါ ပြုလုပ်သူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ၊ ရှက်တာတွေလုံးဝမရှိသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံလာတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့ပါ။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပါ။ ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြန်လှည်တုံ့ပြန်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ သူတို့နဲ့ ကိုယ်နဲ့ အပြန်အလှန်ရန်ဖြစ်နေသလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။
ပြောသင့်တာမျိုးက “ကျွန်မကို အနှောင့်အယှက်မပေးပါနဲ့။ ဆက်ပြီး ဒီလိုလုပ်နေရင် သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားရပါလိမ့်မယ်” အစရှိတဲ့စကားမျိုးကိုခပ်တင်းတင်းနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောပါ။
ဒီနေရာမှာ အက်ဒ်မင်ဖြေရှင်းတဲ့ပုံကိုပြောပြပါရစေ။ အက်ဒ်မင်က ဒီလို အနှောင့်အယှက် ပေးတာမျိုးနဲ့ကြုံရတိုင်း ခွန်းတုံ့ပြန်တာမျိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ နှောင့်ယှက်မှုကို ကိုယ်ကခံယူရာရောက်တယ်လို့ အက်ဒ်မင်ကယူဆပါတယ်။ အက်ဒ်မင်နောက်ထပ် ဂရုစိုက်တဲ့အချက်က ကိုယ်ကသူတို့ကိုကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမပေါ်အောင်ပါပဲ။ မကြားချင်ယောင်ဆောင်တဲ့အခါ ဆောင်သလို သူတို့ရဲ့နှောင့်ယှက်မှုက ဆိုးဝါးတယ်လို့ထင်တဲ့အခါ နှောင့်ယှက်သူရဲ့ မျက်လုံးတည့်တည့်ကို ခပ်တင်းတင်းစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို နှောင့်ယှက်ချင်သူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာသူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုကြောက်တဲ့သူတွေကို ဖြဲခြောက်တတ်သလို သူတို့ကိုမကြောက်တဲ့ သတ္တိရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် ပြန်ရင်မဆိုင်ရဲဘူးလို့ အက်ဒ်မင်က ယုံကြည်ထားလို့ပါ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ မိန်းကလေးတိုင်းကြုံတွေရတဲ့ Cat Calling လို့ခေါ်တဲ့ နှုတ်နဲ့ နှောင့်ယှက်ခြင်း (ပြောရမယ်ဆို ပါးစပ်သရမ်းခြင်း) ဟာ မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အိနြေ္ဒသိက္ခာပျက်ယွင်းသည်အထိ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါ ယောင်းတို့အနေနဲ့ သတ္တိရှိစွာ၊ တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေဟာလည်း သာမန်လူတွေပါ။ စူပါမန်း တစ်ယောက်မှမပါပါဘူး :3 ။ ဒါကြောင့် တွေ့ကြုံလာကြတဲ့အခါ ကြောက်မနေဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လို့..
Tags: Catcalling, disturbing, Motivation, tips, Women News
အလုပ်သင် လုပ်ဖူးရင် ကိုယ်အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ ဘယ်လို အကျိုးရှိနိုင်မလဲ။